शरीरका अंग देखाएर मलाई चर्चा कमाउनु छैन् : सुनिता अधिकारी, गायिका – kalikadainik.com
शनिबार, जेठ १९, २०७५ | १५:३०:१७ |
लोकप्रिय गायिका तथा नृत्याँगना हुन्, सुनिता अधिकारी । पछिल्लोपटक ‘पानको मिसी…’ नामक गीत बजारमा ल्याएपछि उनी यतिबेला प्रशंसाको पात्र बनेकी छिन् । गायिका मात्र होइन्, उनको परिचय मोडलका रुपमा फेरिएको छ । ‘पानको मिसी…’मा उनको गला मात्र होइन्, अभिनय कलाको पनि उत्तिकै प्रशंसा भइरहेको छ । ‘पानको मिसी…’को सफलतापछि नयाँ सिर्जनाको तयारीमा लागेकी सुनितासँग उनको जीवनका विषयमा हामीले केही जिज्ञासा राखेका छौँ, प्रस्तुत छ दैनिक नेपालका लागि हेम रोकाहाले गरेको कुराकानी:
गाउने मात्रै होइन्, खुबै राम्रो नृत्य र अभिनय पनि गर्नुहुँदो रहेछ नि ?
मलाई सानैदेखि नै लोक गीतहरु मन पर्थ्यो । अलिअलि गाउँथे पनि । त्यसमाथि मेरो दाजु पनि लोक दोहारी क्षेत्रमा नै हुनुहुन्छ । उहाँले पनि मलाई यो क्षेत्रमा लाग्ने हौसला दिनुभयो । मेरो गाउँ लोक गीतको लागि उर्भर भूमि भएकाले र घरमा पनि लोक गीतको लागि अनुकुल वातावरण भएकाले म यो क्षेत्रमा लागेकी हुँ । मलाई धेरैले गायिका भनेर चिन्नुहुन्थ्यो, तर पानको मिसी रिलिज भएपछि सबैले अभिनयका लागि पनि प्रोत्साहित गर्नुभएको छ ।
अहिलेसम्मको लोक दोहोरी यात्रा कस्तो छ ?
म लमजुङबाट काठमाडौँ आएपछि मात्रै लोक दोहोरीमा लागेकी हुँ । हालसम्म मेरा केही गीतहरु बजारमा आइसकेका छन् । बीचमा केही उतारचढावहरु आए । लोकसंगीत क्षेत्रमा काम गर्न केही बर्ष विदेश पनि बसेँ । अहिलेसम्म बजारमा आएका गीतहरु दर्शक र स्रोताले मन पराइदिनु भएको छ । उहाँहरुबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएकी छु । त्यसले नै मलाई यो क्षेत्रमा अघि बढ्ने प्रेरणा दिएको छ ।
लोक दोहोरीप्रति मानिसहरुको दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभा’छ ?
हरेकको आ–आफ्नै रुचि हुन्छ । समाजमा लोकदोहोरीलाई मन नपराउने पनि हुनु होला तर मन पराउनेहरु धेरै हुनुहुन्छ । उहाँहरुको कारणले नै लोक दोहोरी क्षेत्र अहिलेको अवस्थासम्म आएको छ । लोकदोहोरीप्रति स्रोताहरुको मिश्रित प्रतिकृया पाएको छु ।
लोकदोहोरीमा निकै विकृति देखियो भन्छन् नि ?
हो, देखिएको छ । स्वीकार्छु । म कसैलाई व्यक्तिगत रुपमा लाञ्छना लगाउन चाहन्न तर लोक दोहोरी क्षेत्रमा विकृति देखिएको चाहिँ सत्य हो । विशेषगरी विभिन्न महोत्सव तथा कार्यक्रमहरुमा यस्तो प्रवृत्ति अलि बढी देखिन्छ । चर्चा कमाउने नाममा अली बढी अश्लिलता हाबी भएको सायद सबैले महसुस गर्नु भएकै छ । त्यसलाई म कसरी नकार्न सक्छु र !
के यो आवश्यक छ त ?
खै, मानिसहरुले त्यस्तै खाले गीत मन पराउँछन त ! युट्युब हेर्नासाथ, त्यस्ता अश्लिल गीतले कति भ्युज पाउँछन् । मानिसहरुले तिनै गीतहरु खोजी खोजी हेर्छन् अनि कलाकारले त जे बिक्छ त्यो नै त दिने हो नि ! यदि त्यस्ता गीतलाई बेवास्ता गरिदिने हो भने यस्ता विकृति आफैँ सेलाएर जान्छन् । म कसैलाई पनि दोष दिन चाहन्न तर अश्लिलताले लोक दोहोरीलाई शोभा दिन्न ।
तपाईँलाई पनि कहिलेकाहीँ त्यसरी नै चर्चा कमाउँझैँ लाग्दैन ?
लोक दोहोरीमा अश्लिलता भएको मलाई मन पर्दैन । आफ्ना शरीरका अंग देखाएर मलाई चर्चा कमाउनु छैन । लोकदोहोरीले नेपाली समाज र नेपाली संस्कृतिलाई झल्काउन सक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । अश्लिलताले लोक दोहोरीप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा नकरात्मक सन्देश फैलाउँछ । मलाई लोक दोहोरीप्रति मानिसहरुले सकारात्मक दृष्टिकोण राखुन् भन्ने लाग्छ ।
सुनिता अधिकारीलाई अब कहिलेसम्म लोकदोहोरी क्षेत्रमा देख्न पाइन्छ ?
म सानै उमेरदेखि यो क्षेत्रमा छु । मेरो उर्जाशील उमेर यसैमा लगाएको छु । केही गरौँ, यो क्षेत्रमा भन्ने सपना छ । त्यसका लागि धेरै सहयोगी हात पनि पाएको छु । धेरैको आर्शिवाद छ, साथ र सहयोग छ । हौसला दिने दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आफन्त र शुभेच्छुक र परिवार पाएको छु । उहाँहरु नै मेरो जीवनको उर्जा हो ।
दर्शकहरुको चाहना अनुसारका नयाँ नयाँ कोसेली पस्कँदै जाने जाने योजनामा छु । आशा छ, मलाई समयले साथ दिनेछ । मेरो दर्शक र स्रोताहरुको आर्शिवाद पक्कै लाग्नेछ । मेरो मेहनत र परिश्रमको फल पाउनेमा म ढुक्क छु ।
हेर्नुस् गायिका अधिकारीको पछिल्लो गीतको भिडियो: